ကားရဲ့ခိုငျခံ့မှု က သမ်မတကား အဆငျ့လောကျရှိတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံ က ကြောငျးကား – Nyi Ma Lay
ကားရဲ့ခိုငျခံ့မှု က သမ်မတကား အဆငျ့လောကျရှိတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံ က ကြောငျးကား
By Nyi Ma LayPosted on January 28, 2021 January 28, 2021
အဝါရောငျသုတျထားတိုငျး ကြောငျးကား မဖွဈပါ
အမရေိကနျ ကြောငျးကားက Truck car ကိုအခွခေံထားပီး Tank car လိုခိုငျခံ့တယျ ရိုးရိုးကားထကျ အဆလေးဆယျ ပိုမာပီး ဆီတိုငျကီ ပတျလညျကို သံခပျြကာကာထားတယျ။ သမ်မတကားနဲ့ တနျးတူရှိပီး ခိုငျခံ့မှုနှုနျးကို ရထားနဲ့တိုကျ စမျးသပျထားတယျ အလေးခြိနျ 16 တနျရှိပီး ရကွေီးနတေဲ့ ခြောငျးကိုအေးဆေးဖွတျနိုငျပါတယျ သူတို့ဆီမှာ ကြောငျးသားကို အဲ့လောကျတနျဖိုးထားပါတယျ။
အမရေိကနျကြောငျးကားနဲ့ပတျသကျပွီး အမြားနညျးတူ ကြှနျမသိထားတဲ့အွ ကမျးဖငျြးအကွောငျးအရာက ဒီအဝါရောငျေ ကြာငျးကားတှဟော လမျးပျေါမှာ ထူးခွားတဲ့အခှငျ့အရေးကိုရထားတဲ့ ကားဖွဈတယျ။ သူနှေးရငျ ကိုယျလို ကျနှေးရတယျ၊ သူ့ဆီက အဝါရောငျမီး မှိတျတုတျမှိတျတုတျလငျးပွီဆို ကိုယျအရှိနျလြော့မောငျးရတယျ၊ သူ့ဆီက အနီရောငျမီးလငျးပွီဆို ကိုယျ့ကားကိုရပျရတယျ။ တကယျလို့ သူမီးနီပွပွီးရ ပျနရေကျနဲ့ ကိုယျ့ကားကို အရှိ နျမလြော့ဘူး၊ မရပျဘူးဆိုရငျ ကွီးလေးတဲ့ပွဈဒဏျကို ခံရတယျ။ မီးသတျကား၊ လူနာတငျကား၊ သမ်မတကား ပဲဖွဈဖွဈ ဒီဥပဒကေို လိုကျနာရပါတယျ။
ပွောကွတာကတော့ အမရေိက နျကြောငျး ကားတှဟော တငျ့ကားလို ခိုငျခံ့ပွီး ထရပျကားလို အခွခေံထားသတဲ့။ တဈနှဈကို ကြောငျး ကားတှအေတှကျ သီးသနျ့သုံးတဲ့စရိတျက ဒျေါလာ ၂၁ ဘီလြံတဲ့။ သူ့ရဲ့လုံခွုံမှုက ရိုးရိုးကား ရဲ့အဆ ၄ဝ လို့ဆိုတယျ။ ဆီတိုငျကီရဲ့ ၄ စငျတီမီတာပတျပတျလညျကို သံခပျြကာကာထားတယျ။ ယာဉျတိုကျမှုဖွဈတဲ့အခါ မီးလောငျပေါကျကှဲမှုမဖွဈအောငျ ကာကှယျတယျလို့ဆိုတယျ။ ကားရဲ့ခိုငျခံ့မှုက သမ်မတကား အဆငျ့လောကျရှိပါသတဲ့။ ခိုငျခံ့မှုနှုနျးကို ရထားနဲ့တိုကျပွီး စမျးသပျခံထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ထိုငျခုံတှကေိုလညျး ယာဉျတိုကျမှုဖွ ဈတဲ့အခါ ထိခိုကျဒ ဏျရာနညျးအောငျ ပွုလုပျထားပွီး ကြောငျးသားတိုငျး ထိုငျခုံနရောရှိရပါတယျ။ ကြောငျးကားကို အဝါရောငျသတျမှတျရခွငျးက ညအခါ၊ မွူတှပေိတျဆို့တဲ့အခါ၊ မှုနျရီဝိုးတဝါးအခြိနျမှာ အမှောငျထုကွားထဲက ထိုးဖောကျမွငျရဖို့ဖွဈတယျ။ ကားကို ACD အမြိုးအစားသုံးမြိုးခှဲထားပွီး အကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ Dအမြိုးအစားက အလေးခြိနျ၁၆တနျရှိတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ရကွေီးနတေဲ့ခြောငျးကိုတောငျ ကြျောဖွတျနိုငျပါသတဲ့။
ဘာဖွဈလို့ ကြောငျး ကားတှကေို သမ်မတကားနီးနီး ခိုငျခံ့အော ငျလုပျထားသလဲ။ ဘာဖွဈလို့ တခွားကားတှထေကျ ထူးခွားတဲ့အခှငျ့အရေးရထားသလဲ။ ဘာဖွဈလို့ သူမီးနီပွ stop ဆိုငျးပွတာနဲ့ ကိုယျ့ကားကို ရပျရသလဲ….
အဝါရောင်သုတ်ထားတိုင်း ကျောင်းကား မဖြစ်ပါ
အမေရိကန် ကျောင်းကားက Truck car ကိုအခြေခံထားပီး Tank car လိုခိုင်ခံ့တယ် ရိုးရိုးကားထက် အဆလေးဆယ် ပိုမာပီး ဆီတိုင်ကီ ပတ်လည်ကို သံချပ်ကာကာထားတယ်။ သမ္မတကားနဲ့ တန်းတူရှိပီး ခိုင်ခံ့မှုနှုန်းကို ရထားနဲ့တိုက် စမ်းသပ်ထားတယ် အလေးချိန် 16 တန်ရှိပီး ရေကြီးနေတဲ့ ချောင်းကိုအေးဆေးဖြတ်နိုင်ပါတယ် သူတို့ဆီမှာ ကျောင်းသားကို အဲ့လောက်တန်ဖိုးထားပါတယ်။
အမေရိကန်ကျောင်းကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အများနည်းတူ ကျွန်မသိထားတဲ့အြ ကမ်းဖျင်းအကြောင်းအရာက ဒီအဝါရောင်ေ ကျာင်းကားတွေဟာ လမ်းပေါ်မှာ ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးကိုရထားတဲ့ ကားဖြစ်တယ်။ သူနှေးရင် ကိုယ်လို က်နှေးရတယ်၊ သူ့ဆီက အဝါရောင်မီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လင်းပြီဆို ကိုယ်အရှိန်လျော့မောင်းရတယ်၊ သူ့ဆီက အနီရောင်မီးလင်းပြီဆို ကိုယ့်ကားကိုရပ်ရတယ်။ တကယ်လို့ သူမီးနီပြပြီးရ ပ်နေရက်နဲ့ ကိုယ့်ကားကို အရှိ န်မလျော့ဘူး၊ မရပ်ဘူးဆိုရင် ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို ခံရတယ်။ မီးသတ်ကား၊ လူနာတင်ကား၊ သမ္မတကား ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဥပဒေကို လိုက်နာရပါတယ်။
ပြောကြတာကတော့ အမေရိက န်ကျောင်း ကားတွေဟာ တင့်ကားလို ခိုင်ခံ့ပြီး ထရပ်ကားလို အခြေခံထားသတဲ့။ တစ်နှစ်ကို ကျောင်း ကားတွေအတွက် သီးသန့်သုံးတဲ့စရိတ်က ဒေါ်လာ ၂၁ ဘီလျံတဲ့။ သူ့ရဲ့လုံခြုံမှုက ရိုးရိုးကား ရဲ့အဆ ၄ဝ လို့ဆိုတယ်။ ဆီတိုင်ကီရဲ့ ၄ စင်တီမီတာပတ်ပတ်လည်ကို သံချပ်ကာကာထားတယ်။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့အခါ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ကားရဲ့ခိုင်ခံ့မှုက သမ္မတကား အဆင့်လောက်ရှိပါသတဲ့။ ခိုင်ခံ့မှုနှုန်းကို ရထားနဲ့တိုက်ပြီး စမ်းသပ်ခံထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုင်ခုံတွေကိုလည်း ယာဉ်တိုက်မှုဖြ စ်တဲ့အခါ ထိခိုက်ဒ ဏ်ရာနည်းအောင် ပြုလုပ်ထားပြီး ကျောင်းသားတိုင်း ထိုင်ခုံနေရာရှိရပါတယ်။ ကျောင်းကားကို အဝါရောင်သတ်မှတ်ရခြင်းက ညအခါ၊ မြူတွေပိတ်ဆို့တဲ့အခါ၊ မှုန်ရီဝိုးတဝါးအချိန်မှာ အမှောင်ထုကြားထဲက ထိုးဖောက်မြင်ရဖို့ဖြစ်တယ်။ ကားကို ACD အမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲထားပြီး အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Dအမျိုးအစားက အလေးချိန်၁၆တန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရေကြီးနေတဲ့ချောင်းကိုတောင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါသတဲ့။
ဘာဖြစ်လို့ ကျောင်း ကားတွေကို သမ္မတကားနီးနီး ခိုင်ခံ့အော င်လုပ်ထားသလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ တခြားကားတွေထက် ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးရထားသလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ သူမီးနီပြ stop ဆိုင်းပြတာနဲ့ ကိုယ့်ကားကို ရပ်ရသလဲ….
ကားထဲမှာ ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေပါလို့.. ဒီကလေးတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ နိုင်ငံ့သားကောင်းရတနာဖြစ်လာမယ့် သူတွေမို့ပါတဲ့။ ကလေးငယ်တွေရဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုကို အစိုးရက အပြည့်အဝ အကာအကွယ်ပေးထားပါတယ်။
ကျောင်းကားတွေ့တာနဲ့ အရှိန်လျော့တန်လျော့ ရပ်တန်ရပ် ကားတိုင်းလိုက်နာကြရပါတယ်..
အင်္ဂလန်ကျောင်းကား.. ကျောင်းသားလေးတွေ ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဖြစ်သမျှအားလုံး ကျောင်းကားတာဝန်ယူရတယ်တဲ့။
အမေရိကန်ကျောင်းကား… လုံခြုံမှုက ကိုယ်ပိုင်ကားရဲ့အဆ ၄ဝ။
ကနေဒါကျောင်းကား… ကျောင်းကားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင် ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်။ ကျောင်းကားက အလုံခြုံအစိတ်ချရဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါတဲ့။ သေဆုံးနှုန်းက သုညလို့ဆိုတယ်။
ပြင်သစ်ကျောင်းကား… ပြည်နယ်အဆင့်လိုင်စင်ရှိမှ မောင်းခွင့်ရှိပါသတဲ့။
ဂျာမဏီကျောင်းကား.. ကျောင်းကားက မီးနီ၊ မီးဝါပြထားရင် ကားကိုမကျော်ရ။
Previous post သဆေုံးသှားခဲ့တာ နှဈပေါငျး ၁၀၀ ခနျ့ ကွာပမေယျ့ အသကျရှငျနဆေဲ ထငျရတဲ့ ကလေးငယျလေး
Next post ဉာဏျကောငျးလှနျးလို့ပငျြးတာလား ပငျြးလှနျးလို့ဉာဏျကောငျးသှားတာလား ဝခှေဲမရနိုငျတဲ့ အပငျြးပါရဂူတှရေဲ့ အခှီဓာတျပုံ (၂၈) ပုံ